Mombamomba ny vondrona - Vondrona Feng Erda
GROUP FENGERDAAny amin'ny tanànan'i Tengzhou izay any atsimon'ny Faritanin'i Shandong ary manana toerana ambony ara-jeografika izy io. Voahodidin'ny tendrombohitra sy rano izy io, miaraka amin'ny Tendrombohitra Tai any avaratra ary Taierzhuang, toerana misy tantara lava, any atsimo. Tanànan'ny "Saint Mozi" sy "Craftsman Luban" izy io, manana voninkazo lotus enina hetsy tapitrisa metatra toradroa ao amin'ny faritaniny-Weishan Lake Honghe Wetland Park, ary iray amin'ireo tanàna fampisehoana fizahan-tany mahafinaritra indrindra ao Shina.
Créé tamin'ny taona 1998 ary nandritry ny 20 taona ny fampandrosoana, FENGERDA GROUP dia namorona ho vondrona vondrona "isan-karazany, lehibe ary manara-penitra". Miaraka amin'ny mpiasa 680 sy fananana mitentina 2,8 miliara, manana indostria lehibe efatra izy, dia ny: Business Metal Abrasive Dep., Alloy Business Dep., Engineering Technology Business Dep. Tsy mahomby vokatra vy orinasa Dep., Ect.
GROUP FENGERDA mandray izany ho adidiny ny mamaly ny filan'ny indostria samihafa ary manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny serivisy marina sy ny qualty avo lenta. Ny vokatra rehetra dia nandalo ny fanamarinana anisan'izany ny "ISO9001: 2015 (Quality)", "ISO14001: 2015 (Tontolo iainana)" ary " GJB9001C-2017 (National Military Standard) .Ny vokatra voalohany dia: (meta abrasives) stee shot, stee grit, vy notapahana tariby, fitifirana stee, fitifirana aluminium, fitifirana varahina, abrasives namboarina; (fitaovana firaka) ferrosilicon, ferrochrome, ferromanganese, carburant sns; ny foibe fanodinana vy sy fantsona lehibe indrindra any South Shandong sy modely isan-karazany amin'ny varotra fantsom-by vy.
GROUP FENGERDAmifantoka amin'ny kalitao, mamorona marika, manompo ny mpanjifa ary miantsoroka andraikitra ara-tsosialy. Noho izany dia nahazo fanehoan-kevitra tsara marimaritra iraisana avy amin'ny indostria lehibe isan-karazany ao an-trano sy any ivelany toy ny "industy fanamboarana sambo, indostrian'ny famokarana fiara, indostrian'ny kaontenera, indostrian'ny mpamokatra lokomotifika sy roling, indostrian'ny vy sy vy". -ary mpanjifa, ny tetikasan'ny orinasa "robot spray and suction and smelting composite material" dia ekena amin'ny sehatra nasionaly ary notondroina ho "orinasa teknolojia avo lenta ary orinasa 100 ambony". Manaraka ny fomba fiasa amin'ny fanompoana amin'ny fomba mahazatra amin'ny fo manontolo ny fanavaozana sy ny fampandrosoana, ny orinasa dia miatrika ny vondrona iraisam-pirenena sy ny indostria mitarika ary miezaka ny ho lasa orinasa "100-taona, 100 sy 10-miliara ambony".